पुनःनिर्माणले भनेको हाउसपुलिङ के हो ? कसरी जोडिन्छन् असन, इन्द्रचोकका घर ? (अन्तर्वार्ता)
प्रकाशित मिति : २०७४ माघ २५ बिहिबार , ४,२४८ पटक हेरिएको
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले काठमाडौंको घनावस्तीमा बहुस्वामित्व र बहुतले घरहरु बनाई संयुक्त आवास प्रणाली विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । प्राधिकरणले भूकम्पपछि काठमाडौं उपत्यकामा क्षतिग्रस्त घर पुननिर्माण हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हाउसपुलिङको माध्यमबाट वस्ती विकास गर्ने निर्णय गरेको हो । यो विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणका सह-सचिव राजुमान मानन्धरको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदललाई काठमाडौं उपत्यकाको घनावस्तीमा संयुक्त आवास प्रणालीको अवधारणलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ, भन्नेबारे अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । यसै विषयमा प्राधिकरणका सह-सचिव राजुमान मानन्धरसँग हामीले कुरा गरेका छाैँ ।
० हाउसपुलिङको अवधारणा किन आयो ?
– शहरी तथा भवन विकास मन्त्रालयमा यसको चर्चा पहिलेदेखि नै भएको हो । नेपालका लागि यो नौलो हो, अमेरिकाको लसभेगसमा यसलाई अर्बन रिजेनेरेशन भनिन्छ, यसैको माध्यमबाट विकास गरिएको छ । तर यसको सन्दर्भ भूकम्प गइसकेपछि ३२ जिल्लामा घर बन्ने क्रम सुरु भयो । घर निर्माणमा सरकारले तीन लाख रुपैयाँ अनुदानस्वरुप दिएको छ । तर उपत्यकामा घर बन्ने क्रम धेरै कम भयो । ३ वर्ष बितिसक्यो, किन घर कम बन्ने भन्ने कुरा खोजी भयो ।
धेरैको घर नगरपालिकाले तोकेको क्षेत्रहरुमा एउटा घर धेरैजनाको स्वामित्वमा रहेको, तर सरकारले एकजनालाई मात्रै तीन लाख रुपैयाँ दिने भन्ने भएकाले घर बनाउन घरधनी अलमलमा परे । जसले गर्दा धेरै घर बन्न बाँकी देखियो । ती घर कसरी बनाउने भन्ने संयुक्त घर निर्माण गर्ने कि भन्ने अवधारणा आयो । त्यसैमध्ये हाउसपुलिङमा जाने कि भन्ने एउटा अवधारणा आयो ।
बाक्लो मिश्रित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका सम्पदा क्षेत्रमा भइरहेका घरहरुलाई एकीकृत गरेर पुननिर्माण गर्ने पुननिर्माण प्राधिकरणमा छुटै समिति गठन भएको छ ।
० हाउसपुलिङले के गर्छ ?
– असन, इन्द्रचोकजस्ता घना वस्तीहरु एउटा बाटोबाट भित्र छिरेपछि एउटा चोक आउँछ, त्यसपछि अर्कोचोक आउँछ । यो काठमाडौं विकासको वास्तविक प्याटन हो । यो डिजाइन प्याटन विस्तारै बिग्रियो । ती घरहरु दाजुभाइले तलैपिच्छ विभाजन गरेर बसेका छन् । सानो–सानो घर छन् । ५–६ फिट चौडाइ भएको घर पनि हामीसँग । जुन घर हाम्रो ऐनले बनाउने दिँदैन । २ आना २ पैसाभन्दा कम कुनै कित्ताकाट हुँदैन । यस्तो अवस्थामा हाउसपुलिङको अवधारणा आइसकेको छ । ऐन आइसकेको छ । यसको कार्यविधि र निर्देशिका बन्न बाँकी छ । सानो चौडाइ भएका सबै घरलाई एकीकृत गरेर मौलिकतालाई यथावत राखेर पुरानो घर भत्काएर नयाँ घर बनाइन्छ । ५० वटा घर छ भने ५० वटै भर्‍याङ हुन्छ, ५० तरिकाबाट उनीहरु बसिरहेका छन् । त्यहाँ पूर्वाधारको समस्या छ, ५ जनालाई एउटा भर्‍याङ दिइयो भने ४ वटा भर्‍याङको ठाउँ बच्छ । यो तरिकाले घर बनाए २२ देखि ३० प्रतिशत स्पेस बढी आउने देखियो । पर्खालको मात्रा पनि कम हुन्छ । हाउस पुलिङबाट सुविधा सम्पन्न घर बन्ने देखिन्छ । यो नगरी नहुने भएको छ । यो जनताको माझमा ल्याउन तपाईले सहयोग गर्नु भो धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु ।
० पहिले देखिको समस्या देखाउनु भो, एउटै घरमा धेरै परिवार देखिएको छ । हाउसपुलिङपछि यहाँले भनेको जस्तो व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ त ?
–बुझाउन सकियो भने धेरै सहज छ । यसमा सबै भन्दा ठूलो कुरा के भने ? सरकारले बनाइदिनु पर्ने होइन है । तपाई एक जना हुनुहुन्छ, मानिलिउँ र हामी १० जना मिलेर हाम्रो घरको अवस्था अहिले मैले भनेको जस्तै समस्या नै समस्याले घेरेको घरमा हामी छौँ । हामी १० जना मिलेर यो घर भत्काउने हो । हामी १० जना मिलेर यसको डिजाइन गर्ने हो । डिजाइनमा सरकारले सहयोग गर्ने हो । नेपाल सरकारले यसलाई सहयोग गर्छ । यसमा, नगरपालिका अगाडि आउनु पर्छ । नगरले डिजाइनमा सहजिकरण गर्ने हो । प्राविधिक सहयोग पनि गर्छ । काम गर्ने चैँ १० जना मिलेर नै हो । घर भत्काउने हो, डिजाइन गर्ने हो, बनाउने हो । बनाउँ गएपछि समान रुपमा उनीहरुलाई त्यही घर बाँड्ने हो । अर्को कुरा यसको दीगोपनको लागि केही यसका अवधारणाहरु छन् । कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा ।
ग्राउन्ड फ्लोर, फस्र्ट फ्लोर व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्दा त्यसबाट सबै घरधनीहरुले समान रुपमा फाइदा लिन सक्छन् । यसमा झन्झट पनि छ, नभएको पनि होइन । सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर कुरा बुझाउन गाह्रो छ । ज र झ भन्छौँ नि हामी जग्गा र झगडा । जग्गाको स्वामित्वको विषयमा झगडा छ । स्वामित्व ६ जनाको छ । त्यस्ता ६ जनाको १० परिवार छ । भन्नाले ६० जनालाई नजिक राखेर कुरा गर्नु भनेको साधारण कुरा हैन । यदि यो कुरा हामीले पब्लिकलाई बुझाउन सक्यौँ भने असन, इन्द्रचोकको क्षेत्रलगायत जुन हाम्रो बाक्लो बस्ती छ , त्यहाँ बुझाउन सक्यौँ भने ती परिवारहरुले हामीलाई यो गरिदेउ भन्ने छन् । बुझाउने कुरा ठूलो हो । पहिलो पटक, दोस्रोपटक । जसरी हामीले ल्याण्डपुलिङ गरेका थियौँ । ल्याण्डपुलिङ पनि निकै गाह्रो छ । हेर्दा मात्रै सजिलो लाग्छा । योसाउथ एसियामै सफल आयोजनाको रुपमा लिइन्छ, नेपालले गरेको ल्याण्डपुलिङ । त्यही किसिमले भोली हाउसपुलिङ पनि हुन आउँछ ।
० जस्तो १० जनाको १० वटा परिवार छ कुनै एउटा घरमा, त्यो १० वटा परिवारलाई घर बनाउँदा तपाइहरुको र सरकारको सहयोग रहन्छ ?
–पूर्वाधारमा पनि सहयोग रहन्छ । जस्तो हिजो पनि जुन घरमा पाइपलाइन हुन्थ्यो, बाटोकै कुरा होला । कतिपय ठाउँमा पाइप राम्रो छैन र त्यो नराम्ररी बसिरहेको छ नि । जसको सेन्टरमा ढलको पूर्वाधार सरकारले बनाउँछ । त्यसमा सरकारको लगानी रहनेछ । बीचमा चोकको ठाउँहरु छ । त्यो चोकहरुको विकासका लागि सरकारले सहयोग गर्छ । डिजाइनलगायत अन्य पूर्वाधारमा सरकारले सहयोग गर्छ । तर, बाँकी घर उनीहरुकै हो नि ! हिजो पनि उहाँहरुले नै बनाउनु हुन्थ्यो । तर, आज हामी घर बनाउनका लागि उहाँहरुलाई निःशुल्क सघाइरहेका छौँ । जस्तो ल्याण्डपुलमा पनि उनीहरुकै जग्गालाई विकसित गरेर उनीहरुलाई दिइएको हो । अहिले चमति, गोपीकृष्णदेखि लिएर नेपालका धेरै ठाउँमा यस्तै प्रकारले काम भइरहेको छ । उहाँहरुकै जग्गा हो नि । त्यस्तै हामीहरुले उहाँहरुकै घरलाई पुल गरेर सुविधायुक्त घर बनाएर दिने हो ।
पुनःनिर्माणको नयाँ फन्डा, लाग्यो प्रदर्शनीतिर
पुरातत्व विभागले भन्यो–परम्परागत शैलीको निर्माण बलियो हुन्छ
मेयर-उपमेयर झगडिएपछि रानीपोखरी पुनःनिर्माणको काम रोकियो
‘बाढी प्रभावित क्षेत्र पुनःनिर्माण प्राधिकरण’ गठन गर्न राजपाको माग
सरकारको सुस्तपनले पुनःनिर्माणमा ढिलाईः डा महत
पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारीमाथि विकास समितिको केरकार
पुनःनिर्माणसम्बन्धी मापदण्ड व्यावहारिक, मापदण्ड नपुर्याएर बनेका घरलाई प्रवलीकरण